Ụlọ ọrụ mkpuchi mkpuchi aluminom | China Aluminium mkpuchi mkpuchi emepụta na suppliers
Ịkụ ngwaahịa n'uko ụlọ nwere ike dozie nsogbu mkpọtụ nke ọma. Mgbe isi mkpọtụ dị n'ime oke mmịpụta ụda a kapịrị ọnụ, mgbe mkpọtụ gafere site na ihe mkpuchi ụda, a na -emepụta esemokwu, nke na -agbanwe ike ebili mmiri ka ọ bụrụ okpomọkụ, si otú ahụ belata ọnụ ahịa ụda ụda.
Ihe mkpuchi aluminom enweghị nkebi bụ iwelata ohere dị n'etiti bọọdụ na bọọdụ ahụ n'oge nrụnye, ka ihe niile wee na -arụ ọrụ nke ọma. ihe nkiri ahụ na -agwakọta, na -atọ ụtọ ma na -agagharị, na akụkụ ahụ dị larịị na -egosi udidi nke ihe nchara alumini, nke dị nso Luster na -egosipụta ịma mma na ịdị ọcha na -adịgide adịgide, kwalite ịdị mma nke ụlọ ahụ, wee mepụta oriri ime mmụọ maka gburugburu ebe obibi!
A na-eji ihe mkpuchi osisi aluminom nke osisi dị elu dị elu, ihe ịchọ mma nke mba ụwa dị elu, usoro dị elu na ọmarịcha, agba na udidi doro anya, usoro siri ike ma na-eguzogide, enweghị formaldehyde, anaghị egbu egbu. , na enweghị mwepụta gas na-emerụ ahụ, yabụ na ị gaghị echegbu onwe gị maka isi na mbibi anụ ahụ nke agba na gluu mere mgbe ịchọchara mma, ịdị mma ya bụ nke mbụ, ọ bụ nhọrọ mbụ maka ịchọ ụlọ mma.
A na-eji mkpuchi aluminom dị elu mee ihe dị ka isi ihe. Ọ bụ CNC na -ehulata ya na teknụzụ ndị ọzọ dị ka nha, ụdị na nhazi nke saịtị ahụ. Ọ na -eji ihe nkiri mkpụrụ ọka Italiantali dabere na fluorocarbon na -efesa n'elu. Ọ bụ ihe eji achọ mma ọla nke nwere ọkwa dị elu nke a na-etinye ohere iji nyefee ihe nkiri okwute na mkpuchi fluorocarbon nke mkpuchi aluminom.
Nko elu-elu nwere ike ime mgbanwe na nha nke elu ụlọ dị ka mkpa oghere si dị. Mgbe edoziri sistemu keel, enwere ike ibugo ya ma jiri aka nkịtị ebutu ya na -enweghị ngwa enyemaka ọ bụla, nke na -agbanwe agbanwe ma dịkwa mfe.
Ihe mkpuchi aluminom a pịrị apị nwere ike na -agbatị mpempe akwụkwọ ahụ dị larịị n'ime echiche nke ohere, ma nwee ọrụ nke nnyefe ọkụ na ikuku ikuku. Nchịkọta nke usoro dị iche iche na nha nke oghere dị warara na nke nwere oghere na-eme ka elu nke ihe ahụ dị ike, jikọtara ya na ụdị na gburugburu dị iche iche maka nhazi ụdị pụrụ iche, na-eme ka ahịrị dị ụtọ ma maa mma.